I-Strain TV Show Cast kunye nabalingiswa
'I-Strain' I-Cast Cast kunye nabalinganiswa
Nalu uluhlu lwesigxina esiphezulu kunye nabalinganiswa kwiichungechunge lwe-TV ye-FX vampire I-Strain , esekelwe kwiincwadi zikaGuillermo del Toro (i- Pacific Rim, i-Crimson Peak, i-Mimic, i-Blade II ).
Corey Stoll njengoDkt. Efrayim "Eph" I-Goodweather (Seasons 1-2)
Ifoto: Frank Ockenfels © FX
Intloko yeZiko leNkundla yeCanary Control Canary eNew York City, u-Eph uphando malunga nesibetho esihlasela isixeko, senza abantu babe yiindawo zokuhlambalaza. Umntu ogqithiseleyo kunye nokubuyisela utywala kunye nemiba yokulawula, uyayinakudla ubomi bakhe bentsapho ekuphishekeleni umsebenzi wakhe, ekhokelela kumfazi wakhe ngokufaka umtshato.
UDavid Bradley njengoNjingalwazi Abraham Setrakian (Seasons 1-2)
UNjingalwazi Setrakian ngumntu osindileyo, osindayo obulala i- Holocaust , esine-pawn esitolo eNew York kwaye unamava ngxaki engabangela izimpendulo malunga nokugqabhuka ... ukuba kukho umntu okholelwa kuye.
UMia Maestro njengoDkt. Nora Martinez (i-Seasons 1-2)
I-biochemist iqela likaEfrayim, uNora usebenza ngokusondeleyo noEfrayim - ngokusondeleyo, eqinisweni, ukuba babe neyonto ebudeni bexesha elidlulileyo. Ungumntu onomdla ojonga umama wakhe ogulayo kwaye unceda ukukhusela unyana ka-Efrayim uZach emva kokuqhaqhaza kwehla.
URichard Sammel njengoTomas Eichhorst (i-Seasons 1-2)
U-Eichhorst ngu-wampiric owayengumNazi ukusuka kwi-Setrakian edlulileyo ebonisa eNew York ukunceda "iNkosi" yakhe isasaze i-virtual virus. Ukhusela ibhokisi likaMfundisi kwaye wenza njengomthunywa weNkosi kwimicimbi yezoshishino, ngokukodwa ngo-Eldritch Palmer.
UJonathan Hyde njengo-Eldritch Palmer (i-Seasons 1-2)
I-Palmer ngumntu osisigxina osemali-bhiliyali omdala ophonsa imali kwiingxaki zakhe-eyona nto igxininisa ukufa kwakhe-ekhokelela ekusebenzisaneni noMninimzi, enethemba lokuba uya kumnika isipho sempilo nobomi obungunaphakade ngokutshintshiselwa inkxaso ngenkxaso ye-vampiric.
USean Astin njengoJim Kent (iNyanga 1)
UJim ungumlawuli we-CDC osebenza noEfrayim noNora ekuphanda nasekulawuleni ukugqabhuka kwevampire, kodwa ukunyaniseka kwakhe kukuphi na?
UMiguel Gomez njengoAgasin "Gus" uElizalde (i-Seasons 1-2)
UGus uyintliziyo entle kodwa i-rough-around-edges-exges con-con kunye ne-smarts yesitalato kunye nesimo sokuphila, zombini ezo zisetyenziswe xa ebhalwa ngamacala amaninzi kwimpikiswano. Unqwenela ukuphindiselela ukufa kwentsapho yakhe ezandleni ze-vampires, ubeka izinto zakhe kwiNkosi.
UNatalie Brown njengoKelly Goodweather (i-Seasons 1-2)
UKelly ungumfazi wa-Efrayim owayengumfazi wokuqala, owamlahla ngaphandle kokuba enqwenela ukwenza umtshato usebenze. Uqalise ubomi obutsha - kuquka nentombi entsha uMat - emva kokufumana ukugcinwa kwabantwana babo kodwa uyayigxeka izilumkiso zomyeni wakhe malunga nokusabalala ... kuze kube sekwephuzile.
Ben Hyland / Max Charles njengoZach Goodweather (Seasons 1-2)
Unyana kaEfrayim noKelly, uZach ukhangele kuyise kwaye uthembekile kuye, nangona uKelly egcinwe. Ngexesha lokuqaqamka, kunjalo, uyazama ukugcina loo mdibaniso kwaye ufuna ukuxhamla kunye nonina, abaye bahlukana nabo.
UJack Kesy njengoGabriel Bolivar (i-Seasons 1-2)
UGabriel Bolivar uyinkwenkwezi yokudlala i-playboy rock kunye nesidlo seziyobisi ongomnye wabasindileyo kwindiza eyabangela ukugqashuka, kodwa kuvela ukuba uMphathi unamalungiselelo amakhulu kuye.
UKevin Durand njengoVasiliy Fet (amaxesha e-1-2)
Ukukhulelwa ngumqwengqangi wase-Ukraine kunye nomoya onamandla okhusela isixeko sakhe aze ahlangane nemfazwe yokulwa nemimpi. Nangona ekhulile ngaphandle, ngokukhawuleza ufumene ewela kwisiDatshi.
I-Ruta Gedmintas njengamaVelders aseDutch (i-Seasons 1-2)
IsiDatshi sisicatshulwa sinobudlelwane be-computer esiqhelanisiweyo kunye ne-Palmer ukusiza ukuphosa isixeko ukuba sibe sisiphazamiseko, kodwa xa eqonda ukuba uyinyaniso yakhe kunye nesimo sokuqhambuka, ujoyina i-Ef, i-Setrakian kunye nabanye kwimigudu yabo yokuxhathisa.
URupert Penry-Jones njengoQuinlan (Ixesha lesibini)
UQuinlan uyisiqingatha-sabantu, isiqingatha-vampire hybrid owayengumGolidiator waseRoma. Unengqondo engatshatanga kwinjongo yakhe yokufumana nokubulala iNkosi kwaye akayi kuvumela mntu ukuba angene endleleni yakhe.
Umdlalo Bonisa ii-Calling Castings
5 Uninzi lwabasetyhini abaphefumlelweyo kwi "Star Trek"
Unokufumana njani iiTikiti kwi-'Rachael Ray Show '
Yiyiphi i-Star-Won Cycle 17 ye "I-America's Next Top Model"?
Inkqubo yokuHlalwa kweNkqubo yokuBhala
Izaziso kwi-Space: Yintoni Enokusifundisa Ngayo yonke indawo
I-Oscar Winners (i-1990-2015)
Ukuthetha nokusetyenziswa kweLizwi "I-Warlock"
Ukuvavanya okukhawulezileyo: I-particle Size
Iingoma ezili-10 eziphezulu zokuhlabelela kwimikhosi yomtshato
Konke malunga neCoffered Ceiling
Izinketho zokufumana iiFilimu eziHlejiweyo / eziHlomelo kunye neThelevishini
Ça va - Ulungelelaniso njani wena ngesiFrentshi
Iifayile zokusebenzela eziqhubekayo
Abantu abaziwayo beGay baMbala
Yintoni "ikedo" kwisivakalisi saseJapan?
Iikholeji ezili-10 kunye neyona ninzi yezoKhokhwa zeSikolo zeBhola